China 3D Embossed UV Resistance Chinoumba WPC Decking vagadziri uye vanotengesa Lihua
Zvigadzirwa muridzi: WPC Kubata
Chinhu Kwete: 3DLS146H23B
Kubhadhara: TT / LC
Mutengo: $ 2.57 / M
Chigadzirwa Chibviro: China
Ruvara: Teak, Brown, Chokoreti, Misidhari, Marasha, nezvimwe
Kutumira Chiteshi: Chiteshi chengarava cheShanghai
Lead nguva: 10-22 MAZUVA
2.4m, 2.9m, 3.6m, kana yakagadzirirwa
Paki, Landscape, Mvura paki
● WPC decking yakakosha zvinhu ndeye PE, huni tambo uye zvinowedzera WPC decking inozivikanwa munyika yese sezvo isu tichishandisa zvakasikwa zvinhu.
● Yedu WPC decking yakanaka uye inoyevedza hunhu huni zviyo dhizaini, bata nekumisikidza nyore, nokudaro inogona kusangana zvakasiyana siyana zvinodiwa zvevatengi.Iyo inogona kuveurwa, kurovererwa, kudhonzwa uye kucheka kuti ikwane zvishongedzo zveakasiyana maratidziro, senge nyika, rekunze gadheni, paki, supamaketi, nezvimwe.
● Yedu WPC yekushongedza inochengetedza zvakatipoteredza, inogadziriswazve zvizere uye hapana imwe njodzi kemikari, haidi kupenda, hapana glue uye yakaderera kugadzirisa.
● Yedu Decking ine yakanaka mamiriro ekunze kugona, inogona kuve yakakodzera kubva -40 ℃ kusvika + 60 ℃ .Yedu WPC decking inogona kushandiswa pasi rese.Nekuti mabhodhi edu ari ekushomeka kwemamiriro ekunze, anti-slip, mashoma makatsemuka, akamira, asina shangu asina shangu .Plus UV chirungiso kuita mapuranga edu UV nemishonga, chichioma nemishonga uye durable.Good divi kutsiga pamusoro mwando tembiricha
Pashure: Kunze Hakuna Kutsemuka & Yakarukwa Wood Chipurasitiki WPC Decking
Zvadaro: Anoshongedza Wood WPC decking yekunze
Mubvunzo: Ndeupi muyero wevatsigiri vekambani yako?
Mubvunzo: Inguva yakareba sei yako mold inoshanda zvakanaka? Nzira yekuchengetedza sei zuva nezuva? Ndeapi masimba eimwe neimwe seti yeanofa?
Artisan gadzira fomura uye gadzira muyenzaniso yekusimbisa iyo ruvara uye mushure mekurapwa nemutengi
Wobva waita iyo granulation (Gadzirira izvo zvinhu), zvobva zvatanga kugadzira, zvigadzirwa zve extrusion zvichaiswa munzvimbo chaiyo, gare gare tichaita mushure mekurapwa, tobva tazvipeta izvi.
Mubvunzo: Inguvai yakajairwa nguva yekuendesa yezvigadzirwa zvako?
Mubvunzo: Une huwandu hwehuwandu hwehuwandu? Kana zvirizvo, chii chiri chidiki odha huwandu?
Mubvunzo: Chii chinonzi chigadzirwa chako? Zvakawanikwa sei?
Mubvunzo: Inguva yakareba sei sevhisi yehupenyu hweWPC zvigadzirwa?
Mubvunzo: Ndeipi nguva yekubhadhara iwe yaunogamuchira?
Mubvunzo: Uchienzanisa nehuni, ndezvipi zvakanakira WPC zvigadzirwa?
Mubvunzo: Zvigadzirwa zveWPC zvinoda kupenda here? Ndeupi ruvara iwe waunogona kupa?
3D WPC Kurongedza
Wakaumbwa WPC decking
UV nemishonga WPC decking
Outdoor Deep Mabhuku eBraille UV nemishonga hwoupenyu WP ...
Outdoor Anti-pitikoti Deep Grain Mabhuku eBraille hwoupenyu ...
huni mapurasitiki ematongerwo decking, WPC rinoumba decking, WPC yekunze decking, Kunze WPC decking, WPC uriri, WPC decking uriri,